Carlos Tevez Oo Lala Xiriirinayo Inuu U Wareegayo MLS-ka Mareykanka Kaddib Markii Uu Qishay Inuu Xilli-dambe Cayaaraha Ka Fadhiisanyo – Garsoore Sports
Carlos Tevez Oo…
Carlos Tevez Oo Lala Xiriirinayo Inuu U Wareegayo MLS-ka Mareykanka Kaddib Markii Uu Qishay Inuu Xilli-dambe Cayaaraha Ka Fadhiisanyo
Inbadan oo kamid ah jamaahiirta kubbada-cagta waxay u maleynayeen in Carlos Tevez uu cayaaraha ka fadhiisanayo kaddib markii uu ku dhawaaqay inuu ka tagayo Boca Juniors bishii June, laakiin ciyaaryahanka reer Argentina ayaa lagu xantaa inuu leeyahay qorshooyin aad u kala duwan.
Intii lagu jiray shirkii jaraa’id ee ugu dambeeyay ee uu la yeeshay Boca Juniors, 37 jirkaan ayaa albaabka u furay inuu ku biiro koox cusub.
“Ma aqaano haddii aan dhaho waan fariisanayaa sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaan kusoo toosiyo seddex bilood gudahood anigoo doonaya inaan ciyaaro oo aan garoonka kusoo laabto. Haddii aan sidaas yeelo, ma noqon doonto funaanadda Boca, mar dambe ma noqon doonto, ”Tevez ayaa u sheegay suxufiyiinta.
Weeraryahanku wuxuu ka bilaabay xirfadiisa kubbada-cagta kooxda reer Argentine ee Boca Juniors isagoo 16 jir ah sannadkii 2001. Wuxuu sii waday inuu la ciyaaro afar xilli ciyaareed kooxda kahor inta uusan u wareegin Brazil, halka uu markii dambe kusoo barbaaray Ingiriiska iyo Talyaaniga oo uu usoo cayaaray kooxaha Manchester City, Manchester United, West Ham iyo Juventus.
Tan iyo shirkiisii ​​jaraa’id ee ugu dambeeyay, mala awaalku wuxuu bilaabay inuu cirka isku shareero oo ku saabsan mustaqbalka ciyaaryahanka. Sida laga soo xigtay ESPN, seddex kooxood oo ka ciyaarta Horyaalka Major League Soccer ee dalka Mareykanka ayaa xiiseynaya weeraryahankan. Kooxahaas lagu xamanayo waxaa kamid ah kooxda David Beckham ee Inter Miami, oo ah koox ay u saftaan shan kale oo reer Argentina ah. Inkasta oo cunaqabatayntii dhawaan la saaray Inter Miami ay kooxda ka joojisay qarashaad badan oo suuqa ay ku bixiso, haddana kooxdu waxaa hadda haysta murug maaliyadeed kahor inta aanay laacibka u soo bandhigin heshiis qaali ah kahor inta uusan ka fadhiisan cayaaraha.
Wariyaha ESPN ee Augusto César ayaa sidoo kale xusay suurtagalnimada Atlanta United uu ugu wareegi karo xiddigan maadaama Tevez uu xiriir la leeyahay tababaraha haatan ee kooxda Gabriel Heinze. Labaduba waxay wada joogeen lix sano oo ay u wada metaleen xulka qaranka Argentine kaddib markii Tevez uu saftay kulankiisii ​​ugu horreeyay sannadkii 2004. Hase ahaatee, Heinze ayaa si aan caadi aheyn uga takhalustay xantaas shirkii dhowaa ee uu qabtay.
City Oo Dooneeysa Griezmann, Arsenal Oo Ku Dhow Saxiixa 2 Xiddig, Man United Oo Heshiis La Gaartay Daafac Heer Sarre Ah & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Maanta
Chelsea Oo Heshiisa Qaali Ah Ku Dooneeysa Federico Chiesa – Talyaaniga Waa Loosoo Dhigtay!!